Waxgarad iyo qurbajoog ka mid ahaa ergooyinka shirka Taleex oo cambaareeyay natiijada shirka. – Radio Daljir
Waxgarad iyo qurbajoog ka mid ahaa ergooyinka shirka Taleex oo cambaareeyay natiijada shirka.
Janaayo 20, 2012 12:00 b 0
Garowe, January 20 ? Waxgarad iyo qurbajoog kasoo jeeda gobollada lagu magacaabo SSC oo ka mid ahaa ergooyinkii ka qayb qaatay shirka Khaatumo 2 ayaa si kulul maantay u cambaareeyay jawiga uu hadda ku socdo shirku, waxaana ay si wadajir ah u tilmaameen in arrinta la siyaasadeeyay shir jaraa?id oo ay ku qabteen magaalada Garowe.
Waxgaradku waxay tilmaameen in ajandayaashii uu ku socday shirku la baalmaray arrintuna ay isku badashay mashaariic laga soo qaatay dawladda Britain, iyo golaha ammaanka, taasi oo ku aadan sidii gobolladaasi looga jari lahaa Puntland. Sida ay hadalka u dhigeen.
Engineer Axmed Maxamuud ?Xandule? oo kasoo jeeda gobolka Cayn ayaa ugu baaqay indheergaradka ku sugan Taleex inay guud ahaanba isaga baxaan shirka Taleex ka socda, waxaana uu si cad u tilmaamay in gobollada Sool, Sanaag, iyo Cayn ay yihiin dhammaantood deegaanno ka tirsan dawladda Puntland.
Maxamuud Mamaxed Cali Cadami ayaa isna sheegay in uu ka soo horjeedo natiijada shirka, aanuna taageeri karin; shirka ayaa uu sheegay in uu yahay shir jabhaheed oo qandaraas lagu soo qaatay.
Cawil Kaatum Axmed oo isna ka haday ayaa sheegay in shirka la majarahabaabiyey, lagana leexiyey ujeedadii laga lahaa.
Shir jaraa’id – Waxgarad & Qurbajoog mucaaraday natiijada Shirka Khaatumo II.
Waxaa sidoo kale qaadacay natiijada shirka Khaatumo hoggaaminyihii SSC Saleebaan Ciise Xaglatoose oo ku dhaliilay guddiga fulintu in ay jajuubeen itijaaha dadka, ayna majarahabaaabiyeen shirka.
Waxaa uu ku baaqay in shir dambe la qabto, lana turxaan bixiyo qaladaadka dhacay, beeshuna ay si midaysan uga tashato aayaheeda.
Mudaaharaad sababay dhimasho & dhaawac oo ka dhacay Laascaanood & Buuhoodle.
Baahin: Khamiis, Jan 19, Jaamac C/raxmaan ~ Daljir ~ Galkacyo. Hoggaanka, xukuumada & dhismaha baarlamaanka D.G. Khaatumo oo la iclaamiyey; R/wasaare Gaas oo magacaabay guddi qaabilsan la-dagaalanka musuqmaasuqa; Suldaan Siciid Cismaan oo aano qabiil darteed lagu dilay Galkacyo; Maamulka gobolka oo sheegay in ay garanayaan cidda dilka gaysatay.